Ambatondrazaka: zandary iray maty nokapain’ny fokonolona antsibe | NewsMada
Lavo teo am-panatanterahana ny asany noho ny fiarovana ala ny GPHC Rahajaharison Lahatra miasa ao Ambatondrazaka, afakomaly tao Amparibolana, fokontany Mandanivatsy, kaominina Besakay, distrikan’Ambatondrazaka. Nokapain’ny fokonolona ny antsibe izy ka namoy ny ainy…
Nahazo taratasy fangatahana fiaraha-miasa avy amin’ny sampandraharam-paritra momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra (DREDD) Ambatondrazaka ny vondron-tobim-paritry Zandarimaria any an-toerana hanampy ireo “agents forestiers” hanao fitsirihana ifotony tevy ala any Mandanivatsy, kaominina Besakay, afakomaly. Voatendry ny zandary miisa roa hanampy ireo “agents forestiers” ka ny 19 janoary 2021 izy ireo no nanainga ho any an-toerana. Rehefa tonga tany Amparibolana izy ireo, nahita ireo olona roa voarohirohy ho tompon’antoka amin’ny fanimbana ala ka nentin’izy ireo tany anaty ala hijery ifotony ny tavy nataony izay tantanin’ny VOI (Vondron’olona ifotony) any an-toerana. Hita tokoa fa simba ny ala. Rehefa niverina avy any anaty ala ireo zandary sy ny “agents forestiers” ary ireo voarohirohy tokony ho tamin’ny 10 ora, efa nisy fokonolona maromaro mitam-piadiana niandry teo an-tanànan’Amparibolana, nangataka ny hamotsorana ireo roa lahy nosamborina. Navotsotr’ireo zandary sy ny “agents forestiers” ireo olona roa ireo tsy hisian’ny fifandonana sy ra mandriaka ka hotohizana ny famotorana.
Zazamena roa voatifitra tao anaty fifanjevoana…
Tampoka teo anefa, nokapain’ny iray amin’ireo Zazamena, fomba fiantso ny Zanaka mpiarakandro miray (Zamami) aty Alaotra, ny lohan’ny GPHC Lahatra ka lavo tamin’izany izy. Nitangorona ireo fokonolona haka ny basiny ka nanao tifi-danitra ilay zandary niaraka taminy. Tsy resy tosika ireo olona ka voatery nitifitra olona iray izy ka maty. Azony ny basin’i GPHC Lahatra ary voatery nandositra izy miaraka amin’ireo basy roa sy ireo “agents forestiers”. Nanenjika avy ato aoriana ireo Zazamena ka afaka ora iray nifanenjehana, babo izy telo lahy. Mbola namaly tifitra ihany ilay zandary ka nahafaty Zazamena roa hafa tamin’io fitsoahana io, ny iray, maty; ny iray, naratra. Mbola nitohy ny daroka sy tsindrona vy maranitra nataon’izy ireo.